ကလေးတွေက လူကြီးတွေထက် ကိုယ်ခံအားပိုနည်းတာလား ကိုယ်ခံအားပိုကောင်းတာလား? | OnDoctor
ကလေးတွေက လူကြီးတွေထက် ကိုယ်ခံအားပိုနည်းတာလား ကိုယ်ခံအားပိုကောင်းတာလား?
😷 263 Total Cases
ကလေးတွေက လူကြီးတွေထက် ကိုယ်ခံအားပိုနည်းပါသလား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအား ပိုကောင်းပါသလား။
အဖြေက လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ ကလေးတွေက လူကြီးတွေထက် ကိုယ်ခံအား ပိုနည်းတဲ့အတွက် ငယ်စဥ်ကလေးဘဝမှာ ဖျားနာလွယ်ပါတယ်။ သုတေသနတွေအရလည်း ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ ခုခံအားစနစ်ဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေလောက် အတွေ့အကြုံမရှိသေးတာကြောင့် အထူးသဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးဝင်ရောက်တာ ပိုဖြစ်လွယ်တဲ့အပြင် ဖျားနာရာကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာဖို့လည်း အချိန်ပိုကြာတတ်ပါတယ်။
ဒီလို ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းနေရခြင်းအကြောင်းအရင်းထဲက တစ်ခုကတော့ ကလေးငယ်အရွယ်တွေဟာ အဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတဲ့အရွယ်မှာ အစားအစာ ပိုစားရတဲ့အပြင် ရေလည်းပိုသောက်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရွယ်ရောက်ပြီးလူတွေထက် လေကောင်းလေသန့်ပိုရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခုခံအားစနစ် သန်စွမ်းဖို့ အချိန်ယူနေရတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေ ကိုယ်ခံအားစနစ်နည်းတာကြောင့် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ
ငယ်စဥ်ဘဝမှာ ကလေးတွေရဲ့ အာရုံကြောစနစ်၊ မျိုးပွားစနစ်၊ အစာခြေစနစ်နဲ့ ခုခံအားစနစ်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲပါ။
ဒီလိုအထိရှလွယ်တဲ့အသက်အရွယ်မှာ ကလေးတွေဟာ ရောဂါအဖြစ်များပါတယ်။ တွေ့ကရာ ကောက်ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲ လက်ထည့်တတ်တဲ့အရွယ်မှာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ အဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
အစာမာ စားတတ်တဲ့အရွယ်မှာဆိုရင်လည်း အစားအသောက်တွေက ပါလာတတ်တဲ့ ဆိုးဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး စတဲ့ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေကြောင့် ဝမ်းပျက်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်က ကြပ်ခိုးတွေ၊ မီးခိုးငွေ့တွေ၊ တိရစ္ဆာန်အမွှေးတွေကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေ အဖြစ်လွယ်ပါသေးတယ်။
ကလေးတွေဟာ မိခင်နို့ချည်း သီးသန့် ၆ လ (Exclusive breastfeeding) သောက်သုံးမှ မိခင်နို့ကတဆင့် ခုခံအားဓါတ်တွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီခုခံအားတွေဟာ ကလေးငယ်စဥ်ဘဝမှာ ရောဂါတစ်ချို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေး၊ ထိုးနှံခြင်းကနေတဆင့်လည်း ခုခံအားတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုတေသနတွေအရ ကလေးအသက် ၇ နှစ်နဲ့ ၈ နှစ်အရွယ်ရောက်မှ သန်စွမ်းတဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ် ရရှိနိုင်တာပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ ကာကွယ်ဆေးတွေကို အချိန်မှန်၊ စနစ်တကျ ထိုးနှံတိုက်ကျွေးထားမယ်ဆိုရင် အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ)ရောဂါ၊ ဆုံဆို့၊ ကြက်ညှာ၊ မေးခိုင်ရောဂါ၊ ပိုလီယိုရောဂါ၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါအပြင် တခြားရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေ မွေးကင်းစကနေ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ကိုယ်ခံအားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့
မွေးကင်းစကလေးဘဝကနေ ကလေးအသက် ၆ လ အထိ မိခင်နို့ကနေတဆင့် အာဟာရဓါတ်ကို ရယူရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိခင်နို့ကနေတဆင့် သီးသန့်ရလာတဲ့ ခုခံအားဓါတ်ကို အသုံးချပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ကာကွယ်ရပါတယ်။ သုတေသနတွေအရ ဖော်မြူလာနို့မှုန့်တိုက်တဲ့ကလေးတွေထက် မိခင်နို့သီးသန့်တိုက်ကျွေးတဲ့ ကလေးတွေက ပိုပြီး ခုခံအားစနစ်ပိုကောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်ခုခံအားကောင်းစေဖို့ မိခင်နို့သီးသန့်တိုက်ကျွေးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်နို့ကို မွေးကင်းစကနေ ကလေးအသက်အရွယ် ၂ နှစ်အထိ တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ လမ်းလျှောက်တတ်ခါစအရွယ်နဲ့ မူကြိုတက်ခါစအရွယ်
လမ်းလျှောက်တတ်ခါစအရွယ်ကလေးတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုပြီးထိတွေ့ရပါတယ်။ အိမ်လည်ထွက်တာအပြင် မိဘတွေက လမ်းလျှောက်ထွက်ပေးတာကအစ ပတ်ဝန်းကျင်က ရောဂါပိုးမွှားတွေနဲ့ ပိုထိတွေ့လွယ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မူကြိုတက်ခါစအရွယ်မှာဆိုရင် မိမိအိမ်မဟုတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရွယ်တူကလေးငယ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အတွက် နာမကျန်းပိုဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
ဒီအသက်အရွယ်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံတွေကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ချက် ပြုတ်ကျွေးမွေးသင့်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံတွေကနေရတဲ့ ဗီတာမင်ဓါတ်တွေနဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေဟာ ရောဂါအမျိုးမျိုးကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက် အလေ့အကျင့်ရအောင် အစာအုပ်စု (၃) စုဖြစ်တဲ့ အားအင်ဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အစားအစာ (ဥပမာ – ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း)၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားစေတဲ့အစားအစာ (ဥပမာ – အသား၊ ငါးအမျိုးမျိုး၊ ပဲအမျိုးမျိုး) နဲ့ ရောဂါကာကွယ်စေတဲ့အစားအစာ (ဥပမာ – ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ) စတာတွေကို ညီညွတ်မျှတအောင် ကျွေးမွေးပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ လက်ပုံမှန်ဆေးကြောခြင်း၊ လက်သည်းခြေသည်း ပုံမှန်ညှပ်ပေးခြင်း၊ ပုံမှန်ရေချိုးခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်ခြင်း စတာတွေကို သင်ကြားလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင် ရောဂါအမျိုးမျိုးကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၃။ ကျောင်းတက်စအရွယ်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်
ကိုယ်ခံအားစနစ် စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ ကျောင်းတက်နေချိန်အရွယ်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ မကူးစက်နိုင်အောင် မိဘတွေအနေနဲ့ ပြုစုထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသင့်တဲ့အပြင် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ဖို့ အားပေးသင့်ပါတယ်။ မိသားစုလိုက် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်တာက ကလေးငယ်တွေတင်မက မိဘတွေကိုယ်တိုင်လည်း ရောဂါပေါင်းစုံကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ရောဂါဘယကင်းဝေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ ဖြစ်လာစေဖို့
ရောဂါကင်းဝေးပြီး သန်စွမ်းကျန်းမာတဲ့ လူငယ်လူကြီးတွေဖြစ်လာစေဖို့ ကလေးဘဝငယ်စဥ်တည်းက ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမှာက မိဘတွေရဲ့တာဝန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းပြီး ရောဂါကာကွယ်စေနိုင်ဖို့ မွေးကင်းစဘဝမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် မိခင်နို့သီးသန့် ၆ လ တိုက်ကျွေးပါ။ အစာမာ စားတတ်စအရွယ်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စတင်ပြီးကျွေးပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံတွေကို စားလေ့ရှိအောင် အလေ့အကျင့်လုပ်ထားပါ။ ကာကွယ်ဆေးကို အချိန်မှန်မှန်နဲ့ စနစ်တကျ သွားရောက်ပြီး ထိုးနှံတိုက်ကျွေးပါ။ ဒါ့အပြင် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းတွေကို စနစ်တကျနဲ့ သင်ကြားပေးထားမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအနေနဲ့ ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ရရှိပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ လူငယ်လေးတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းလာကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။